Muparidzi 3 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Chimwe nechimwe chine nguva yacho (1-8)
Kunakidzwa neupenyu chipo chinobva kuna Mwari (9-15)
Nguva isingagumi iri mumwoyo memunhu (11)
Mwari anotonga vanhu vese zvakarurama (16, 17)
Vanhu vanofa sezvinongoita mhuka (18-22)
Zvese zvinodzokera kuguruva (20)
3 Chinhu chimwe nechimwe chine nguva yacho,Nguva inoitika chinhu chese pasi pedenga: 2 Nguva yekuberekwa nenguva yekufa;Nguva yekudyara nenguva yekudzura zvakadyarwa; 3 Nguva yekuuraya nenguva yekuporesa;Nguva yekukoromora nenguva yekuvaka; 4 Nguva yekuchema nenguva yekuseka;Nguva yekuridza mhere nenguva yekutamba;* 5 Nguva yekurasa matombo nenguva yekuunganidza matombo;Nguva yekumbundira nenguva yekurega kumbundira; 6 Nguva yekutsvaga nenguva yekurega kutsvaga uchiti hazvichawaniki;Nguva yekuchengeta nenguva yekurasa; 7 Nguva yekubvarura+ nenguva yekusona;Nguva yekunyarara+ nenguva yekutaura;+ 8 Nguva yekuda nenguva yekuvenga;+Nguva yehondo nenguva yerugare. 9 Mushandi anowaneiko pabasa rake rese?+ 10 Ndakaona basa rakapiwa vanakomana vevanhu naMwari kuti vagare vakabatikana. 11 Iye akaita zvinhu zvese zvakanaka* panguva yazvo.+ Akatoisa nguva isingagumi mumwoyo mavo; kunyange zvakadaro, vanhu havafi vakanzwisisa basa rakaitwa naMwari wechokwadi kubvira pakutanga kusvikira pakupedzisira. 12 Ndakaona kuti hapana chinhu chiri nani kwavari kupfuura kuti vafare uye kuti vaite zvakanaka muupenyu hwavo,+ 13 uyewo kuti munhu wese adye nekunwa uye afadzwe nezvinhu zvakanaka pakushanda kwake nesimba. Icho chipo chaMwari.+ 14 Ndava kuziva kuti zvinhu zvese zvinoitwa naMwari wechokwadi zvichagara nekusingaperi. Hapana chekuwedzera kana kutapudza pazviri. Mwari wechokwadi akazviita zvakadaro, kuti vanhu vamutye.+ 15 Zvese zvinoitika zvakatomboitika, uye zvichauya zvakagara zviripo;+ asi Mwari wechokwadi anotsvaga zvanga zvichiedza kuitwa.* 16 Ndakaonawo izvi pasi pezuva: Panzvimbo pekutonga zvakarurama paiva neuipi, uye panzvimbo pekururama paiva neuipi.+ 17 Saka ndakati nechemumwoyo: “Mwari wechokwadi achatonga vese, vakarurama nevakaipa,+ nekuti zvinhu zvese nemabasa ese zvine nguva yazvo.” 18 Ndakataurawo nechemumwoyo kuti Mwari wechokwadi achaedza vanakomana vevanhu ovaratidza kuti vakafanana nemhuka, 19 nekuti kune magumo evanhu nemagumo emhuka; zvese zvinoguma zvakafanana.+ Kufa kunoita chimwe, ndiko kufa kunoita chimwe chacho; zvese zvine simba reupenyu rimwe chete.+ Saka munhu hapana paanopfuura mhuka, nekuti zvese hazvina zvazvinobatsira. 20 Zvese zvinoenda kunzvimbo imwe chete.+ Zvese zvinobva kuguruva,+ uye zvese zvinodzokera kuguruva.+ 21 Ndiani anonyatsoziva kana simba reupenyu revanhu richikwira kudenga, uye kana simba reupenyu remhuka richidzika panyika?+ 22 Uye ndakaona kuti hapana chinhu chiri nani pane kuti munhu afadzwe nebasa rake,+ nekuti ndiwo mubayiro* wake; nekuti ndiani angamuita kuti aone zvichaitika kana iye aenda?+
^ ChiHeb., “yekukwakuka; yekusvetuka-svetuka.”
^ Kana kuti “zvakanyatsorongwa.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “zvakapfuura.”
^ Kana kuti “mugove.”